Olo-malaza 6 izay tokony ho ao amin'ny Hall of Fame WWE - Wwe
Olo-malaza 6 izay tokony ho ao amin'ny Hall of Fame WWE
Ny 'elatry ny olo-malaza' ao amin'ny Hall of Fame WWE dia olana mampiady hevitra eo amin'ireo mpankafy. Mpankafy maro no mahatsapa fa manaisotra ny voninahitry ny efitrano amin'ireo mpanao tolona mpiady tena izy, raha ny hafa kosa mahita fa mety kokoa ny fampidirana ireo mpialamboly tsy mpiady amin'ny efitrano malaza ho an'ny orinasa iray, andao hatrehana izany, dia resaka fialamboly avokoa.
inona ny mangidy ao anaty olona
Ary koa, ahoana no fomba iantsoanao azy hoe 'elatra' raha tsy misy trano tena izy? Mandrosoa, WWE, atsangano sahady ity zavatra adala ity. Te-hitsidika azy io aho ary hanery ny fianakaviako handany ny tontolo andro miaraka amiko. Midika izany fa misy a voan-tsinapy Hall of Fame and Museum ( tsia, matotra tokoa, any Wisconsin ary efa tany aho ary mahatalanjona ) fa tsy iray ho an'ny WWE. Mazava fa miaina ao anatin'ny fandaharam-potoana maizina indrindra isika.
Na izany na tsy izany, ny zava-misy dia navotsotra avy tao anaty tavoahangy ilay génie rehefa natsangana tamin'ny taona 2004 ny lohan'i Cincinnati Reds sy ny mpitarika ny baseball an'i Pete Rose. lobbying hiditra ao amin'ny Hall of Fame MLB taorian'ny norarany tsy hilalao baseball noho ny filalaovana amin'ny lalao raha toa ka mpilalao / mpitantana.
Ny mpikotrana Hall of Fame malaza voalohany an'ny WWE, Pete Rose
Na dia tsy isan-taona aza nanomboka nahita fidirana mankamin'ny elany, dia mbola afaka manisa ny mombamomba ny mpikambana ao aminy toa ny kintan'ny fahitalavitra teo aloha sy ny mpifaninana WrestleMania I Andriamatoa T, ny angano ady totohondry ary ny mpitsara an'i WrestleMania XIV Mike Tyson, kintan'ny sarimihetsika ary ny governoran'i California teo aloha Arnold Schwarzenegger, ary filohan'ny Etazonia Donald Trump ankehitriny.
Satria mbola hanao izany ihany i WWE, andao jerena ireo olo-malaza enina izay mendrika ampidirina ao amin'ny Celebrity 'Wing' ao amin'ny Hall of Fame WWE.
# 6. Dennis Rodman
The Worm sy Hollywood
OK, milamina, Beavis. Alohan'ny hanombohanao mihorakoraka sy mikorontana momba ny fomba tsy niasan'ny angano NBA Dennis Rodman ho an'ny WWF / WWE taloha, mila anao mamaly fanontaniana iray tena tsotra aho.
Dia inona izany?
Voalohany, be dia be ny tena toetran'ny mpiady izay mbola tsy niasa tao amin'ny WWE (Verne Gagne, Nick Bockwinkel, Gordon Solie, mba hanonona anarana telo fotsiny) taloha. Fanampin'izany, ny elatry ny olo-malaza. Iza no hiraharaha?
Faharoa, i Dennis 'The Worm' Rodman dia ampahany manan-danja tamin'ny ankolafy New World Order an'ny WCW izay, tsy fantatro raha fantatrao izany, no ampidirina amin'ity taona ity. Nandray anjara tamin'ny lalao malaza maro tao amin'ny WCW PPV izy - hita miharihary ny fiarahan'ny ekipa niaraka tamin'i Hulk Hogan nifanandrina tamin'ny Diamond Dallas Page sy ny namana superstar NBA Karl Malone tao Bash tao amoron-dranomasina 1998.
Naneho ny fisainana i Dennis Rodman ary, sahy lazaiko, ny fihetsika tamin'io vanim-potoana io tamin'ny tolona pro (hmmm ... Manontany tena aho raha mba nahita anarana ho an'izany izy ireo). Ambonin'izany ... tena tsy nahatsiravina izy tao anaty peratra. Ny tiako holazaina dia tsy izy LEHIBE fa izy dia helo tsara lavitra noho i Jay Leno.
Etsy an-danin'izany, i Jay Leno dia tsy ato amin'ity lisitra ity.
fotoana hitenenana hoe tiako ianao
nahoana aho no mieritreritra fa tsy tian'ny olona aho
ny olon-tiana tsy te-handany fotoana miaraka amiko
ahoana no ahafantarana raha misy fihenjanana eo amin'ny lahy sy ny vavy
tia olona tsy tia anao miverina
Teny 3 izay mamaritra anao indrindra